Dell Vostro 5581 Urban Gray (i5-8th Gen)-3 ~ ICT.com.mm
HomeDell Vostro 5581 Urban Gray (i5-8th Gen)-3
Windows 10 Home NB0020055 NB12DELL#5581I5060UG Intel 8th Gen Core i5-8265U Processor 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS 4GB – DDR4, 2666Mhz 1TB 5400RPM HDD Nvidia(R)GeForce MX 130 2Gb GDDR5 Wireless Bluetooth... [Learn more]
Brand: DellSKU: 69982N/ASee more: Computer Systems, Dell, Laptops / Notebooks, New Arrivals, Products, ShopFilter by: 15.6", 1TB HDD, 4GB RAM, EDIT-TWO, Gray, Intel Core i5-8th Gen, Laptops (PC), NVIDIA GeForce MX 130 2GB, Promotion, USD, Windows 10 Home
4GB – DDR4, 2666Mhz
သီးသန့်ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပါတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်ငန်းသုံး i5 Laptop တစ်လုံးကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Dell Vostro 5581 Laptop လေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ CPU အဖြစ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ i5-8th Gen Processor က ဘယ်လိုရုံးသုံးဆော့ဖ်ဝဲမျိုးကိုမဆိုသွက်သွက်လက်လက် အသုံးပြုနိုင်စေမဲ့ Processor ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မျက်နှာပြင်ကို 15.6" အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီးကြည်လင်တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Full HD Resolution ရရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ IPS နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် သာမန် Full HD မျက်နှာပြင်တွေထက်ကာလာအရောင်အသွေးပိုမို စိုပြည်လှပပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကပါးလွှာတဲ့ဘေးဘောင်ဒီဇိုင်းဖြစ်တာကြောင့် ကျစ်လျစ်တဲ့ကိုယ်ထည်မှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့မြင်ကွင်းကိုရရှိစေမှာပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်အောင် CPU ကိုကူညီပေးဖို့ RAM 4GB (DDR4, 2666MHz) ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွေအများကြီးကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့အတွက် HDD 1TB ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ NVIDIA GeForce MX 130 ဂရပ်ဖစ်ကတ်က ‘Dedicated’ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး HD အရည်အသွေးရှိ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် Editing ပြုလုပ်နိုင်စေသလို အလယ်အလတ် PC ဂိမ်းတွေကိုလည်း သွက်သွက်လက်လက်ကစားနိုင်စေမှာပါ။ NVIDIA ရဲ့ Optimus R နည်းပညာက Laptop စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စေရုံသာမက ဘတ္ထရီအား ကြာရှည်ခံအောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ။ OS အတွက် Windows 10 Home ကိုတပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် Cracked Version တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Window Update Error တွေအတွက် စိတ်ညစ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ ဘတ္ထရီအတွက် 3Cell, 42Whr ဘတ္ထရီကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အရောင်ကွဲအနေနဲ့ 'Ice Gray' နဲ့ 'Urban Gray' တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Laptop လေးကိုစတိုင်ကျကျသယ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက် Carry Case အိတ်တစ်လုံးကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Dell Mouse တစ်လုံးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Latest processors: Tackle the challenges of your day with the latest technology, up to 8th Gen Intel® Core™ i7 processors. Great graphics: Multitask without interruption or run graphics-rich applications with NVIDIA® MX130 discrete graphics. Memory and storage to spare: Expand storage and memory as needed with PCIe NVMe SSD options, plus up to 8GB DDR4 memory. Power saving: Peak shift reduces power consumption by automatically switching the system to battery power, even when plugged intoadirect power source.
Seamless PC/smartphone integration: Dell Mobile Connect pairs your iOS or Android smartphone with your laptop. You get the option to channel notifications ICT.com.mmfrom phone calls, SMS, IMs and other apps right to your laptop so you can keep your focus onasingle screen.
This item: Dell Vostro 5581 Urban Gray (i5-8th Gen)-3 K1,092,357